I-C-star - IShanghai's International Trade Fair for Solutions and Trends All about Retail, eyilungu lomndeni we-EuroShop Trade fairs, ikhule ngokushesha selokhu yaqala ngonyaka ka-2015 futhi isibe yindawo enkulu ethintekayo embonini yezokuthengisa kulo lonke elaseChina. I-C-star 2020 yayiphumelele ...
Siphusha izinhlobo ezimbili zomkhiqizo omusha - iDynamic Curtain RGB LED Strip & Dynamic RGB LED Module. Isakhiwo ngasinye sixoxa indaba, kanjalo nengaphakathi kufanele. Amapaneli we-lightbox akha amandla ashibilika kalula avela ku-HYM Lighting angakusiza ukuyilungisa leyo ndaba. I-modular design mak ...
Lokhu yi-Couleur Lighting ebambe iqhaza kwi-EuroShop, uhlelo lwango-2020 lomcimbi obaluleke kakhulu emkhakheni wezokuthengisa lunikeze ithuba iCouleur Lighting ukukhombisa ukuvela kwayo nezinto ezintsha. Sifuna ukubonga wonke umuntu ovakashele idokodo lethu e-Euroshop eDüsseldo ...